Sida loo ogaado haddii aan ka gudbay aragtida - VidaBytes | LifeBytes
Encarni Arcoya | 29/05/2022 10:27 | La cusbooneysiiyay 31/05/2022 08:35 | Macluumaadka
Markaad qaadato imtixaanka aragtida shatiga wadista, waxaad ogtahay in neerfayaashaadu ay joogaan meel ka baxsan qolka aad imtixaanka ku galayso. Laakiin markaad baxdo, way ku duubaan: miyaan soo maray? Ka warran haddii aan guuldarraystay? Goorma ayaan helayaa qoraalka? Sideen ku ogaan karaa inaan ka gudbay aragtida? Ma inaan hadda codsadaa fasallada baabuurka wax-ku-oolka ah?
Ha werwerin, tallaabada ugu horreysa waa inaad ku gudubto imtixaanka aragtida iyo tan, inta aad diyaarsan tahay oo aadan ku dhicin dabinada ay dejisay DGT, way fududahay inaad ku gudubto. Laakiin, xataa way fududahay in la ogaado natiijada sida ugu dhakhsaha badan.
1 Imtixaanka darawalnimada aragtida, tallaabada ugu horreysa ee lagu helo shatiga
2 Waxaan sameeyay aragtida, goormay i siinayaan qoraalka?
2.1 Maxaa dhacaya haddii aan mashquuliyo oo aanan eegin?
3 Sidee lagu ogaan karaa haddii aan gudbiyay aragtida
3.1 Maxay weydiisanayaan si ay u helaan qoraalka teoretik?
3.2 Sidee loo arkaa khaladaadkii aan sameeyay?
Imtixaanka darawalnimada aragtida, tallaabada ugu horreysa ee lagu helo shatiga
Sidaad ogtahay, Helitaanka shatiga darawalnimada waxay u baahan tahay inaad ka gudubto laba imtixaan oo khasab ah. Xaqiiqdii mid ma samayn kartid adigoon kan kale ansixin. Waxaan ka hadleynaa imtixaan aragtiyeed kaas oo ay ku weydiinayaan koodka wadista, calaamadaha, iwm.; iyo imtixaanka la taaban karo oo aad ku wadi doonto gaadhiga dugsiga si ay u qiimeeyaan habka wadistaada.
Tani waxay tusinaysaa in aanay ahayn "tollida iyo heesaha". Inkasta oo dad badani ay qaataan waqti aad u yar si ay u soo saaraan, sababtoo ah si degdeg ah ayay wax u bartaan ama sababtoo ah waxay hore u ogaayeen, qaar kale oo badan ayaa waqti qaata. Mararka qaarkoodna neerfayaashu waxay kugu ciyaari karaan khiyaamo.
Imtixaanka ugu horreeya ee la sameeyo waa mid aragtiyeed.. Ma jirto taariikh sax ah oo la sameeyo, inkastoo, marka aad iska diiwaan geliso dugsiga wadista waxaad haysataa muddo x bilood ah si aad isu soo bandhigto oo aad u hesho liisankaaga. Markaa, waxay qaadan kartaa toddobaad, laba, bil, laba... had iyo jeer waxaa lagugula talinayaa inaad sameyso markaad dhab ahaantii dareento inaad diyaar u tahay iyo sidoo kale imtixaanada aad samayso ee ku celcelinta ma laha in ka badan 2 khalad.
Marka la sameeyo, sideen ku ogaan karaa inaan ka gudbay aragtida? Uma baahnid inaad soo wacdo dugsiga wadista marar badan si ay kuu sheegaan haddii ay horeba natiijada u heleen. Dhab ahaantii, waxaad ku arki kartaa gudaha DGT. Sidee? Waanu kuu sharaxnay.
Waxaan sameeyay aragtida, goormay i siinayaan qoraalka?
Marka aad ka baxdo qolka lagu sameeyay imtixaankii baabuurka, waxaa kugu soo wajahan shaki iyo cabsi aad ka qabto inaad ogaato inaad ka gudubtay iyo in kale.
Runtu waxa ay tahay in ay ku xidhan tahay sida imtixaanka loo qaaday. Waxaad arki doontaa: haddii aad ku samaysay kombuyuutar, sidaas natiijada tan waxaa la daabacay 17.00:XNUMX galabnimo ka dib. isla maalintaas; haddii ay warqad ku jirtay, natiijadu waxay noqon doontaa, ugu yaraan, laga bilaabo 17.00:XNUMX galabnimo maalinta xigta.
Hadda, kiiskan labaad waxay la macno tahay inay joogi karaan maalinta xigta, laakiin maaha mid caadi ah, taas oo ah, waxay joogi karaan maalinta xigta, laba maalmood, saddex maalmood, toddobaad ...
Haddii ay warqad ku taal, isku hubayso dulqaad sababtoo ah waxay qaadan kartaa wakhti.
Maxaa dhacaya haddii aan mashquuliyo oo aanan eegin?
Waxaa laga yaabaa inay dhacdo inaad naftaada u soo bandhigto khabiirka oo aad fasax gasho adigoon rabin inaad ogaato darajada. Ma daawan kartaa hadhow? Haa, iyo maya... Waan sharxi doonaa.
Marka loo eego DGT INatiijooyinka imtixaanku waxa la soo dhejiyay laba toddobaad. Sidaa darteed, haddii aanad fiirin qoraallada ka horreeya labadaas toddobaad, way baaba'ayaan oo ma ogaan doontid natiijada. Maaha Waa inaad isku daydaa inaad la hadasho DGT ama dugsigaaga wadista si aad isku daydo inaad hesho qoraalka, in kasta oo ay caadi tahay in dugsiga wadista laftiisa uu tan kumbiyuutarkiisa ku jiro, markaa dhib badan ma laha.
Waxaad hore u garanaysay ereyga ay ku siin karaan qoraalka teoretikiga. Laakiin maxaa dhacaya haddii aad rabto inaad daawato? Waa awoodaa?
Runtu waxay tahay haa, wayna fududahay Waad ku mahadsan tahay internetka sababtoo ah waxa lagaa rabo waa inaad gelisaa bogga DGT. Gaar ahaan, waa inaad tagtaa sede.dgt.gob.es/en/driving-licences/exam-notes.
Boggaas wuxuu ku geynayaa midigta qaybta aan rabno. Oo halkan waxaad dooran kartaa laba doorasho:
Shahaado la'aan. Halkaas oo aad ku bixin doonto macluumaad si ay kuu siiyaan qoraalka.
Waji ka waji Meesha aad tagi lahayd si aad shaqsi ahaan ugala tashato DGT.
Sida aan rabno inay noqoto mid fudud oo degdeg ah, waa inaad doorataa ikhtiyaarka ugu horreeya.
Maxay weydiisanayaan si ay u helaan qoraalka teoretik?
Sidaan horey kuugu sheegnay, ikhtiyaarka shahaado la'aanta wuxuu kuu ogolaanayaa inaad aragto darajadaada aragti, laakiin, ka hor intaanan ku tusin, Waxay ku weydiin doontaa xog taxane ah si loo hubiyo inaad adiga tahay. Maxaa xog ah? Kuwa soo socda:
NIF/NIE. Taasi waa, lambarka aqoonsiga ee aad haysato.
Taariikhda imtixaanka. Maalinta saxda ah ee aad soo muuqatay. Halkan waa inaad taas ku dhejisaa, uma baahna halka aad ku samaysay.
Fasalka ogolaanshaha. Hadii aad imtixaan ka gashay A, B, C, D... Midka mootooyinka waa A, midka baabuurkana waa B. Kuwa kale waa kaarar loogu talagalay baabuurta waaweyn (buska, basaska...).
Taariikhda dhalashada Waa macluumaadka ugu dambeeya ee ay ku weydiiyaan waana inay hubiyaan inay dhab ahaantii adiga tahay.
Haddii wax walba ay sax yihiin, waxaad heli doontaa shaashad aad ku arki doonto xogtan:
Warbixin shaqsiyeed. Yacni, magaca, magaca qoyska, aqoonsiga...adiga si aad u hubiso inay saxan yihiin (haddii uu khalad jiro, waxa fiican inaad sida ugu dhakhsaha badan u saxdo).
Tipo imtixaan. Haddii ay dhacdo inaadan kaliya arki doonin inaad ka gudubtay aragtida, laakiin sidoo kale tan la taaban karo.
Taariikhda imtixaanka. Goormaad is-baartay?
Aqoonta. Tani waa xogta ugu badan ee la codsado. Oo halkan waa inaad ogaataa in, haddii ay tiraahdo "Apt" inaad gudubtay aragtida. Haddii ay tiraahdo "Ma habboona" waa inaad dib ugu noqotaa waxbarashada si aad mar kale isu muujiso.
Khalad sameeyay Tani waxa ay tilmaamaysaa haddii aad wax khalad ah ka gashay imtixaankii aragtida (ama imtixaankii la taaban karo) iyo waxa ay ahaayeen.
Sidee loo arkaa khaladaadkii aan sameeyay?
Dad badan, xitaa oggolaaday, Waxay rabaan inay ogaadaan khaladaadka ay sameeyeen si ay wax uga bartaan. Maaddaama DGT ay ogtahay in kuwa shaqada ka joojinaya ay sidoo kale rabaan inay la tashadaan iyaga, waxay awood u siiyeen qaybtaas si aad u aragto, laakiin hab "si qarsoodi ah". Waana taas si sax ah kuugu sheegi maayaan waxaad khalad samaysay, laakiin khatarta khaladaadka.
Haa, kaliya waxay kuu sheegi doonaan imtixaanka dhabta ah, aragti ahaan waxay ku siin kartaa tirada khaladaadka, laakiin ma qeexi doonto waxa su'aalaha ahaa.
Xagga khaladaadka duuliyaha, waxaad haysataa saddex:
Furayaasha ciribtirka Waa dembiyo culus, haddii aad gasho, baaraha ayaa joojin kara imtixaanka oo ku joojin kara isla goobta.
La'aan Laba kaliya ayaa loo ogol yahay sababtoo ah waa khaladaad caqabad ku ah.
Fudud Waxay kuu oggolaanayaan ilaa 10 waana kuwa ugu jilicsan.
Waxaad hore u garanaysay jawaabta sida loo ogaado haddii aan gudbiyay aragtida. Waxaan kuu rajaynaynaa nasiib markaad eegto iyo inaad si dhakhso ah isu soo bandhigi karto duuliyaha.
Wadada buuxda ee maqaalka: LifeBytes » Macluumaadka » Sidee lagu ogaan karaa haddii aan gudbiyay aragtida